माओ त्सेतुङ विचारधाराका जीवन्त भावनाको अवलम्बन गरौँ ! – सी चिनफिङ | रक्त न्युज
माओ त्सेतुङ विचारधाराका जीवन्त भावनाको अवलम्बन गरौँ ! – सी चिनफिङ
माओ त्सेतुङ विचारधाराको जीवन्त भावना भनेको विचारधारामा ठोस बनेर रहेको अडान, दृष्टिकोण एवम् पद्धति हुन्, जसका तीनवटा आधारभूत पक्षहरू छन् – तथ्यबाट सत्यको खोजी, जनपक्षीय नीति र स्वतन्त्रता । नयाँ अवस्थामा चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको बृहत् उद्देश्यलाई अगाडि बढाउन र हाम्रो पार्टी निर्माण गर्नमा माओ त्सेतुङ विचारको जीवन्त भावनालाई उच्च रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
माक्र्सवादको मौलिक सिद्धान्तअनुरूप तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्नु, विश्वलाई बुझ्नु र रूपान्तरण गर्नु चिनियाँ कम्युनिस्टहरूका लागि एक आधारभूत आवश्यकता हो । यो हाम्रो पार्टीको विचार गर्ने, काम गर्ने र नेतृत्व गर्ने आधारभूत तरिका हो । हामी आफूले गर्ने हरेक काममा यथार्थबाट सुरु गर्ने, व्यवहारबाटै सत्यको जाँच र विकास गर्ने सिद्धान्तलाई सकार्दै आइरहेका छौँ र त्यसो गरिरहने पनि छौँ ।
माओ त्सेतुङले एकपटक भन्नुभएको थियो, “तथ्य भनेको वस्तुगतरूपमा रहेका सबै चिजहरू हुन् । ‘सत्य’ भनेको तिनीहरूको आन्तरिक सम्बन्ध हो त्यसको तात्पर्य तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने नीतिहरू हुन्, र ‘खोज’ भन्नाले त्यसको अध्ययन गर्नु हो ।” ‘निशानामा वाण हान्नु’ भन्ने उहाँले आलङ्कारिक दृष्टान्त दिनुभयो । त्यसको तात्पर्य चीनको क्रान्ति, आधुनिकीकरणको अभियान र सुधारको ‘निशानामा’ माक्र्सवादको ‘वाण’ हान्नुपर्दछ भन्ने थियो ।
तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्न हामीले कुनै वस्तुको यथार्थताको गहन समझदारी प्राप्त गर्नुपर्दछ र सतहबाट वस्तुको भित्री तहसम्म नियाल्नुपर्दछ । खण्डित वस्तुस्थितिको माझमा वस्तुहरू बीचका जटिल अन्तरसम्बन्ध पत्ता लगाउनुपर्दछ ।
वस्तुको अस्तित्व र त्यसको वस्तुपरक नियतिलाई मानेका छौँ भन्ने आधारमा हामीले वस्तुगत नियमहरूको अनुगमन गर्नुपर्दछ । तथ्यहरूबाट सत्यको खोजी गर्ने सिद्धान्तको अनुसरण सधैँका लागि एकपटक मात्र गर्ने कुरा होइन । एक कुनै खास स्थान र समयमा मात्र यस सिद्धान्तको अनुशरण गरेर तिमी सफल हुनसक्छौ । तर, त्यसको अर्थ तिमी यो सिद्धान्तको अनुसरण गरेर अर्को कुनै स्थान र समयमा पुनः सफल होलाऊ भन्ने होइन । कुनै एक स्थान र समयमा हासिल गरेको निचोड र अनुभव अर्को स्थान र समयमा आवश्यक रूपमा प्रयोग नहुनसक्छ । हामीले चेतनशीलरूपले हाम्रो अवधारणलाई सबल बनाउनुपर्दछ र तथ्यहरूबाट सत्यको खोजी गर्ने हाम्रो दक्षतामा वृद्धि गरी त्यसको प्रयोग गर्नुपर्दछ । यो कुरा हामीले सदा मनमा लिनुपर्दछ र काममा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
आजको हाम्रो अवस्थामा तथ्यहरूबाट सत्यको खोजी गर्नु भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले हाम्रो आधारभूत राष्ट्रिय अवस्था स्पष्टरूपमा बुझ्नुपर्दछ । त्यो के हो भने हाम्रो राष्ट्र अझै पनि समाजवादको प्राथमिक तहमा छ र आउने धेरै समयसम्म सोही स्थितिमा रहनेछ । सुधार र विकासलाई अगाडि बढाउँदा र नीति एवम् निर्देशनहरू बनाउँदा, आधारभूत राष्ट्रिय अवस्थासँग मेल खाने प्रकारले सबै कुराहरू गर्नुपर्दछ । वस्तुगत अवस्था र समयको वास्ता नगरी शीघ्र सफलताका लागि मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति पन्छाउनुपर्दछ र वास्तविकतासँग मेल नखाने कुनै पनि पुरानो अथवा ऐस आरामी विचार र कार्यहरूलाई जसले वास्तविकताका मूलभूत परिवर्तनहरूलाई बेवास्ता गर्छन् तिनलाई बिनाअपवाद सच्याउनुपर्दछ ।
तथ्यहरूबाट सत्यको खोजी गर्दा जनताको भलाइका लागि हामीले सधैँ सत्यतालाई अङ्गाल्नुपर्दछ र गल्तीहरू सच्याउनुपर्दछ । स्पष्ट, निःस्वार्थ र निडर भई तथ्यहरूमा आधारित सत्यलाई हामीले साहसी बनेर व्यक्त गर्नुपर्दछ र निर्णय एवम् काम गर्दा भए–गरेका सैद्धान्तिक विचलन र भूलहरू आइपर्नेबित्तिकै पत्ता लगाई सच्याउनुपर्दछ । वस्तुपरक नियम, समयका माग र जनताका इच्छाहरूसँग मेलखाने प्रकारले हाम्रा विचार र कार्यहरू बनाउन सबै प्रकारका द्वन्द्व र समस्याहरू पत्ता लगाउनु र समाधान गर्नुपर्दछ ।
तथ्यहरूबाट सत्यको खोजी गर्दा हामीले व्यवहारमा आधारित सैद्धान्तिक नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू भौतिक, वैचारिक मूल्यसहितका सार्वभौम सत्य हुन् । तापनि, माक्र्सवादका शास्त्रीय लेखकले सत्यको पूर्णतः खोजी गरेनन् तर खोज र विकासको बाटोलाई प्रकाश दिए । आज हामी चिनियाँ विशेषताहरूसहितको समाजवादमा संलग्न भई त्यसको विकासमा लाग्दा गहनस्तरमा कार्य सञ्चालन गर्दा देख्न सकिने तर आकलन गर्न नसकिने अप्ठ्याराहरू तथा खतराहरूका बीच प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्दा हाम्रा बाटा अगाडि नयाँ समस्याहरू देखापर्ने छन् । यी सबै कुराहरूका लागि नयाँ र उचित सैद्धान्तिक समाधानको आवश्यकता पर्दछ । हामीले पार्टीको नेतृत्वमा जनताले आर्जन गरेको ताजा अनुभवहरूको समीक्षा गर्नुपर्दछ । चिनियाँ सन्दर्भमा माक्र्सवादको अटुटरूपमा अनुशरण गर्नुपर्दछ र चीनमा माक्र्सवादलाई अरू उज्यालो रूपले चम्काउनुपर्दछ ।
‘जनपक्षीय नीति’ पार्टीको जीवनाधार र मौलिक कार्यसिद्धान्त हो । यो एउटा आदरसाथ स्थापित गरिएको परम्परा हो जसले हाम्रो पार्टीलाई आफ्नो शक्ति र सङ्घर्षशील क्षमता चालु राख्न सक्षम बनाउँदछ । जनताको भलाइका लागि तिनीहरूको शक्तिमाथि भर पर्दै जनताको चेतनशील कार्यमा परिवर्तित गर्नमा र जनपक्षीय विचारधारा सबै सरकारी कार्यहरूमा लागु गर्नमा हामी सदा नै प्रतिबद्ध थियौँ र रहनेछौँ ।
‘जनपक्षीय नीति’ ले सारभूतरूपमा जनता इतिहासका निर्माता हुन् भन्ने माक्र्सवादको विचारलाई समेटेको छ । इतिहासको अग्रगति निर्देशित गर्ने आधारभूत नियमहरू बुझ्न हामी सिद्धान्तमा लिप्त हुनुपर्दछ । यी नियमहरू पालना गरेर हामी अजेय रहनुपर्दछ । इतिहासले समय–समयमा के प्रमाणित गरेको छ भने जनता ऐतिहासिक विकास र सामाजिक प्रगतिका विशाल शक्ति हुन् । माओ त्सेतुङले भन्नुभएअनुसार “एकपटक जब चीनको भविष्य जनताको हातमा पर्छ, चीनले पूर्वमा उदाउने सूर्यलेझैँ उज्यालो ज्वालासहित धरतीका प्रत्येक कुनालाई जाज्वल्यमान बनाउनेछ ।”
‘जनपक्षीय नीति’ मा आबद्ध हुनु भनेको जनता हाम्रो भविष्य र भाग्यबारे निर्णय गर्ने मौलिक शक्ति हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु हो । पार्टीलाई अभेद्य बनाउने बलियो आधारशिला राष्ट्रमा जनताको प्रमुखताप्रति हाम्रो संलग्नता र तिनीहरूको कार्यतत्परतालाई पूर्णरूपमा क्रियाशील बनाउनुमा भर पर्दछ । जनताको अगाडि हामी सबै सधैँ विद्यार्थी हौँ । त्यसकारण, हामीले उनीहरूबाट सल्लाह लिनुपर्दछ । हामीले जनताबाट हामीलाई सुम्पिएको अधिकार स्मरण गर्दै त्यसको बुद्धिमानीपूर्वक परिचालन गर्नुपर्दछ र तिनीहरूको सुपरीवेक्षण एवम् स्वागत गर्नुपर्दछ । हाम्रो पार्टीको जग सुदृढरूपमा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धिको सिर्जना गर्न हामी तिनीहरूमाथि निकटरूपमा निर्भर रहनुपर्दछ ।
‘जनपक्षीय नीति’ आबद्ध रहनु भनेको पूर्ण हृदयले जनताको सेवा गर्नु हो भन्ने मूलभूत नीतिको अनुशरण हो ।
कानुनी आदेशहरू जनताको आकङ्क्षाअनुरूप छन् भने तिनीहरू मान्य हुन्छन् । यदि जनताको आकङ्क्षाविपरीत छन् भने तिनीहरू निष्कृय हुन्छन् । दिलोज्यान लगाएर जनताको सेवा गर्नु पार्टीको मौलिक उद्देश्य हो, सबै कार्यहरूको अन्तिम निष्कर्ष हो र यो एक सङ्केत हो जसले हाम्रो पार्टीलाई अरू पार्टीको दाँजोमा उच्च राख्दछ । पार्टीका सम्पूर्ण कार्यका लागि उच्चतम मापदण्ड यसले विशाल बहुसङ्ख्यक जनताको आकङ्क्षामा कत्तिको सेवा पु¥याउँछ भन्ने हो । हाम्रा सबै कामको प्रभावकारिता जनताले अन्ततोगत्वा प्राप्त गर्नसकेका खास फाइदाहरू, तिनीहरूको जीवनमा आएका सुधारहरू र तिनीहरूको हक एवम् चाहनाहरू कतिसम्म राम्रो तवरले सुरक्षित भएका छन् भन्ने कुराबाट नाप्नुपर्ने हुन्छ । समृद्ध जीवनप्रति तिनीहरूको आकङ्क्षामा हामी आत्मसन्तोष एवम् खुकुलो भइरहन मिल्दैन बरु कडा परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता पर्दछ ताकि सबै स्वच्छरूपमा विकासको प्रतिफलमा सहभागी हुन र उन्नतितर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सकून् !
‘जनपक्षीय नीति’ मा आबद्ध हुनुको अर्थ पार्टी र जनताबीच निकट सम्बन्ध कायम गर्नु भन्ने हो । हाम्रो पार्टीको उच्चतम राजनीतिक उपादेयता जनतासँग यसकोे निकट सम्बन्ध हो । शासकीय पार्टीको निमित्त ठूलो खतरा भनेको जनताबाट अलग्गिनु हो । माओ त्सेतुङले भन्नुभएको छ, “हामी कम्युनिस्टहरू बिउजस्ता हौँ र जनता माटोजस्ता हुन्, हामी जहाँसुकै पनि जनताको साथमै हुन्छौँ त्यही जरो गाड्छौँ उनीहरूकै बीचमा फुल्छौँ । सबै पार्टी सदस्यहरूले पहिले जनता र अनि जनपक्षीय विचारधाराको सिद्धान्तलाई मनमा लिनुपर्दछ र तिनीहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । हामीले पार्टीभित्र खास गरेर जनतालाई असन्तुष्ट लागेका समस्या समाधान गर्न सक्दो किसिमले कार्य गर्नुपर्दछ जसबाट पार्टीले सधैँ तिनीहरूको विश्वास र समर्थन प्राप्त गर्न सकोस् ।”
‘जनपक्षीय नीति’ मा आबद्ध रहनुको तात्पर्य जनतालाई हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गर्न लगाउनु हो । ‘कुनै कानुन असल छ छैन भन्ने कुरा जान्ने जनता नै हुन्’ कुनै राजनीतिक पार्टीको भविष्य र भाग्य जनसमर्थनले नै निर्धारण गर्दछ । जनसमर्थनबाटै हामीले हाम्रो शक्ति प्राप्त गर्दछौँ । जनसमर्थनविना पार्टीको विशाल लक्ष्य कहिल्यै पनि हासिल हुनसक्तैन । पार्टीको शासकीय शक्ति र क्रियाकलाप जाँच्ने काम हाम्रो होइन । पार्टीको कार्यको उच्चतम र अन्तिम न्यायाधीश जनता हुन्, जनताले मात्र त्यसको जाँच गर्न सक्छन् । यदि हामी ढोङ्गी भएमा र आफूलाई जनताबाट विच्छेद गरेमा वा उनीहरूभन्दा माथि आफूलाई स्थापित गरेमा हामीलाई निश्चय नै तिनीहरूले परित्याग गर्नेछन् । कुनै पनि पार्टीको विषयमा यो कुरा लागु हुन्छ र यो एउटा फलामे नियम हो, जसको विकल्प हुँदैन ।
पार्टी र जनताको शक्तिमा भर पर्दै क्रान्ति, विकास र सुधारका विभिन्न तहहरू पार गर्दै चीनको वास्तविकताबाट आर्जेको अपरिहार्य निचोड ‘स्वतन्त्रता’ हो । हाम्रो राष्ट्रिय विकास र राष्ट्रिय स्वाभिमान एवम् विश्वासको सुरक्षाको अनुभूति गर्न हामी सधैँ आफूमाथि नै आश्रित रहनुपर्दछ । विगतमा झैँ हाल र भविष्यमा हाम्रो बाटोमा दृढतापूर्वक लागिरहनुपर्दछ ।
स्वतन्त्रता चिनियाँ राष्ट्रको गौरवमय परम्परा हो र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी एवम् जनगणतन्त्र चीनको निर्माणका लागि आवश्यक सिद्धान्त हो । एक पिछडिएको अर्थव्यवस्था र विशाल जनसङ्ख्या भएको पूर्वीय राष्ट्र चीनमा विद्यमान वास्तविकता र क्रान्ति एवम् विकासप्रतिको हाम्रो अभिभाराले के निश्चित गरेका छन् भने, हामी आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
९३ लाख वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल, सम्पन्न पुख्र्यौली सांस्कृतिक सम्पदा र १ अरब ३० करोड चिनियाँ जनताबीचको बलियो गाँठोको स्वाभिमानसहित हामी आफ्नै बाटोमा अगाडि बढ्न दृढसङ्कल्पित छौँ । हाम्रो उपादेयता प्रदर्शन गर्ने हाम्रो लामो र समृद्ध इतिहासमा आधारित ठूलो रङ्गमञ्च छ, जसबाट हामी फाइदा लिन सक्छौँ र त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउन शक्तिशाली उत्साह दिन्छ । हामी सबै चिनियाँ जनता प्रत्येकले यसबाट आत्मविश्वास प्राप्त गर्नुपर्दछ ।
स्वतन्त्रतामा आबद्ध रहनुको अर्थ चिनियाँ मामिलाहरूबारे चिनियाँ जनता आफैले व्यहोर्नु र निर्णय लिनुपर्दछ भन्ने हो । संसारमा यस्तो कुनै विकास प्रणाली छैन, जुन विश्वव्यापीरूपमा प्रयोग गर्न सकियोस्, न कुनै विकासको निश्चित मार्ग छ जुन ढुङ्गामा कुँदिएको छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विषमताले विभिन्न राष्ट्रहरूले चुन्ने विकास पथहरूको विभिन्नता निर्धारण गर्दछ । मानवजातिको सम्पूर्ण इतिहासमा कुनै पनि राष्ट्र वा राज्य केवल बाहिरी तत्वहरूको भरमा र अरूहरूको अन्धो अनुगमनको आधारमा शक्तिको उचाइमा पुग्न र आफूलाई पुनःरूत्थान गर्न सकेको छैन । त्यसो गर्न खोज्दा अपरिहार्यरूपमा असफलता र पराधीनतातर्फ धकेलिनुपर्दछ ।
हाम्रो पार्टीले सदा क्रान्ति, विकास र सुधारको सम्बन्धमा निर्देशन गर्दा आफ्नो विकास स्वतन्त्ररूपमा लेखाजोखा र अभ्यासको मानसिकता एवम् आफ्नै बाटोमा आबद्ध रहने विश्वास तथा दृढता पार्टीका सबै सिद्धान्तहरू र अभ्यासको स्थायी स्तम्भको रूपमा लिएको छ । यो हाम्रो पार्टी र जनताले एक विजयपछि अर्को विजय हासिल गर्दै जाने कुराको निश्चितता हो ।
स्वतन्त्रतामा आबद्ध रहनुको अर्थ चिनियाँ विशेषताहरू सहितको समाजवादको बाटोमा दृढतापूर्वक लाग्नेछौँ भन्ने हो । हामी बन्द ढोकाको पुरानो एकोहोरो नीति लिने छैनौँ न हाम्रो ध्वजा नै परिवर्तन हुने गरी गलत बाटो लिनेछौँ । हामीले चिनियाँ समाजवादका सिद्धान्त एवम् व्यवस्थाहरू र मार्गप्रति हाम्रो राजनीतिक आस्था एवम् विश्वासमा वृद्धि गर्नुपर्दछ । हामीले परिवर्तित अवस्था र कामअनुसार चिनियाँ विशेषताहरू सहितको समाजवादी बाटोलाई फराकिलो बनाउँदै सर्वपक्षीय सुधारमार्फत यी सिद्धान्तहरूलाई गहकिलो बनाई व्यवस्थालाई सुधार्नुपर्दछ । हामीले अन्य संस्कृतिको उपलब्धिहरूबाट शिष्टरूपले फाइदा लिनुपर्दछ तर कहिल्यै आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सनुहुँदैन । हामीले आँखा चिम्लेर अरू राष्ट्रको विकासका मानचित्रहरूको नक्कल गर्नुहुँदैन न तिनीहरूलाई आंशिकरूपमा नै स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
स्वतन्त्रतामा आबद्ध रहन हामीलाई शान्तिको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको अवलम्बन र शान्तिपूर्ण विकासको मार्ग अनुशरण गर्न आवश्यक छ । हामीले शान्ति, विकास, सहयोग र सबैको हितका लागि आफ्नो झन्डा उच्चरूपले ग्रहण गर्नुपर्दछ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तको आधारमा अन्य राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । साथै, समानता र पारस्परिक लाभको आधारमा अन्य राष्ट्रसित आदान–प्रदान र सहयोगको परिचालन, विश्व शान्तिको प्रखर संरक्षण एवम् सामूहिक विकासको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । हामीले विषयवस्तुका आफ्नै गुणहरूको आधारमा हाम्रा अवधारणा र नीतिहरू बनाउनुपर्दछ । हाम्रो विकासपथको बारेमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिने प्रत्येक जनताको अधिकारलाई स्वच्छ र न्यायसङ्गत अवधारणसहित आदर गर्नुपर्दछ । कहिल्यै अरूमाथि हाम्रो धारणा लाद्नुहुँदैन र अरूको धारणा हामीमाथि थोपर्न पनि दिनुहुँदैन ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका पक्षमा अडिग छौँ ¤ सबै प्रकारका दबाब र शक्तिको राजनीतिको विरोध गर्दछौँ ¤ न कहिल्यै दबाबको सिर्जना गर्दछौँ, न आधिपत्यको बाटोमा लाग्दछौँ । हामी हाम्रो सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासका स्वार्थहरूको दृढतापूर्वक संरक्षण गर्दछौँ । कसैले पनि यो न सोचून् हाम्रो सार्वभौमिकता, सुरक्षा अथवा विकासको मामिलामा हानि पु¥याउने कुनै पनि कुरा हामीले स्वीकार्नेछौँ, न त्यसका लागि हाम्रा मूलभूत स्वार्थहरूको मोलमोलाइ नै गर्नेछौँ !
( माओ त्सेतुङको १२० औँ जन्मजयन्तीका दिन जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी चिनफिङले दिनुभएको मन्तव्य )..onlinemajdoor बाट
अघिल्लो लेखमाव्यवस्था बदलिए पनि नेपाली जनताले कहिल्यै सुखको सास फेर्न पाएनन् : चित्रबहादुर केसी
अर्को लेखमाकविता मसाल बोकि क्रान्तिको